एउटै बाइकमा….५ जनालाई….बोकेर हेलमेट नै नलगाई तिब्र गतिमा कुदेका चालकलाई रोकेर प्रहरीले गरे सडक मै नमस्कार…! – Gorkhali Dainik
October 6, 2020 440
हनुमन्थ रायडुले चलाएको बाइकमा बच्चासहित पाँच जना सवार छन् । चालकले हेलमेटसमेत लगाएका छैनन् । चालक आफ्नो परिवारका साथ कतै गइरहेको समयमा प्रहरी चेकिङमा परेका हुन् ।
भारतकै एक प्रहरी अधिकारीले मंगलबार ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त तस्वीरकैयौँ पटक ट्वीट र ‘रि–ट्वीट’ गरिएको छ ।त्यस्तै हजारौँ जनाले तस्वीरलाई ‘लाइक’ गरेका छन् ‘कमेन्ट’ गरेका छन् ।
उक्त तस्वीर आन्ध्र प्रदेशको अनन्तपुर जिल्लामा लिइएको हो । बेंग्लोरका पूर्वी भेगका डीसीपीले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘यसले (पुलिकसकर्मी) अरु के नै गर्न सक्छ र रु हामीसँग सँधै एउटै विकल्प हुन्छ, हमेशा सुरक्षित विकल्प चुन्ने ।
Prevहरेक १० मध्ये एक व्यक्तिमा कोरोना हुनसक्छ….:::डब्ल्यूएचओ
Nextमहिलाको गोप्य अंग हेर्दा हेर्दै…….चर्चित नायकहरू…….क्यामारामा ‘कैद’ भए….!
इन्बक्समा न’ग्न तस्वीर माग्ने युवकलाई यी युवतीले यो जे गरिन् त्यो….अहिले भाईरल…!
BREAKING NEWS: नेपालमा भित्रियो नयाँ भाइरस, भोलि देखि १ महिना सम्म लकडाउन, पुरा हेर्नुहोस् (3012)
हार्दिक बधाई : रेखा थापाले यि हेण्डसम युवक संग लगनगाठोँ कस्दैँ ? (1760)
बाघको आ”तंक फेरि; बर्दियाको ठाकुरबाबाका ६२ वर्षीय रावतको मृ’त्यु (1704)
कोरोनाको डरलाग्दो कहर, पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर थप ९ सय जनामा कोरोना पुष्टि